ရုရှားရဲ့ မရဏဒုံးပျံ စီမံကိန်းဟာ တကယ်လား? ဖြီးလုံး တခုလား? - Zet Star
ရုရှားရဲ့ မရဏဒုံးပျံ စီမံကိန်းဟာ တကယ်လား? ဖြီးလုံး တခုလား?
September 15, 2020 ZCC News	0 Comments
၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရုရှားခေါင်းဆောင် ဗလာဒီမီယာပူတင်က ရုရှားရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လက်နက်ဆန်း ၆ ခုကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အသံထက် ၁.၅ ဆ မြန်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ ဘဲဗက်စနစ်ခ် အမည်ရ အနူမြူစွမ်းအင်သုံး တိုက်ချင်းပစ်ခရုစ်ဒုံးပျံကြီးဟာလည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုမြူလောင်စာသုံး ramjet အင်ဂျင်တပ်ထားတာမို့ အကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်မရှိရောက်နိင်တဲ့အပြင် လေကာစနစ်တွေကိုပါ ရှောင်ကွင်းနိင်တယ်လို့ ရုရှားတွေကဆိုပါတယ်။
အကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်မရှိတယ့်အပြင် ဝဲပျံနေနိင်ချိန်ဟာလည်း သီအိုရီအရဆို နှစ်ရှည်လများပျံနိင်ပါမယ်။ သူ့ရဲ့ နူစွမ်းအင်သုံးအင်ဂျင်လုပ်ဆောင်ပုံဟာ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်က အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ SLAM တိုက်ချင်းပစ်ခရုစ်ဒုံးပျံ စီမံကိန်းနဲ့တူညီ နိင်ပါတယ်။
SLAM တိုက်ချင်းပစ်ခရုစ်ဒုံးပျံကြီးဟာ အသံထက် ၄ ဆ ကျော်မြန်နှုန်းရှိပြီး နျူကလီးယားဗုံး/ဟိုင်ဒရိုဂျင်ဗုံး ၁၆ လုံး သယ်ယူနိင်ပါတယ်။ (ဓာတ်ရောင်ခြည်ပြသာနာကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ SLAM စီမံကိန်းဟာ လက်တွေ့တခါမှပစ်ခတ်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပေမယ့် နူစွမ်းအင်သုံး TORY-II Ramjet အင်ဂျင် ကတော့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်) အနည်းဆုံး ၁ မီဂါတန်အား အနူမြူထိပ်ဖူးသယ်ယူမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘဲဗက်စနစ်ခ် ကို မဟာဗြူဟာမြောက်လက်နက်ကြီးတခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ရုရှားစစ်ဖက်ဟာ ၂၀၁၇ ထဲက ဘဲဗက်စနစ်ခ် တိုက်ချင်းပစ်ခရုစ်ဒုံးပျံကြီးတွေကို စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ၁၃ ကြိမ်မြောက်မြေပြင်ကနေ ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မူကို ကာပူစတင်ယားစ် ဒုံးပစ်ကွင်းကနေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားသတင်းဌာန TASS ကတော့ ၂၀၁၉ စမ်းသပ်မူအပြီးမှာ ဘဲဗက်စနစ်ခ်ဟာ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဓိကစမ်းသပ်မူအဆင့်တွေ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးကတော့ ၂၀၁၇ နှစ်လယ် ကနေ ၂၀၁၈ နှစ်စအထိ ဘဲဗက်စနစ်ခ် ကို ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မူလေးကြိမ်စလုံးမှာ ဒုံးတွေဟာ ဘာရင်ပင်လယ်ထဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီး ဒီ ၄ ကြိမ်မှာ အကြာဆုံးပျံသန်းချိန်ဟာ ၂မိနစ်သာဖြစ်ပြီး ဒုံးဟာ ၃၅ ကီလိုမီတာသာ ပျံသန်းနိင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလေးကြိမ်ထဲမှာ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ယူဇနီကျွန်းကနေ ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မူအပြီး တလအကြာမှာ ရုရှားဖျက်သင်္ဘော နဲ့ ဘက်စုံသုံးဆယ်တင်ရေးသင်္ဘော ပါဝင်တဲ့ သင်္ဘော၈စီးပါ စစ်ရေယာဉ်စုဟာ ဘာရင်ပင်လယ်ပြင်ကို ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ ဒီရေယာဉ်စုဟာ အာတိတ် သမုဒ္ဒရာမှာ တိုက်ကင်းလှည့်ဖို့ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းတာဝန်က ပျက်ကျတဲ့ အနုမြူစွမ်းအင်သုံး ခရုစ်ဒုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကို ရှာဖွေဆယ်ယူဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စုစုပေါင်းစမ်းသပ်မူ ၁၃ ကြိမ်ထဲကတခုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက အနောက်ဥရောပတိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေဒီယိုဓာတ်ပြန့်လွင့်မူနဲ့ပက်သက်ပုံရပါတယ်။
ပြင်သစ် အနုမြူသုတေသနဌာနက ရေဒီယိုဓာတ်ပြန့်လွင့်မူမှာ ruthenium 106 အိုင်ဆိုတုပ်ပါ၀င်ပြီး ရာသီဥတုဒေတာအချက်အလက်တွေအရ ရုရှား-ကာဇက်စတန်နယ်ခြားဒေသ ယူရဲယ်တောင်တန်းဒေသနဲ့ ဗော်လ်ဂါမြစ်ကြား ကနေစတင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ (ရုရှားဟာ သက်တမ်းတိုတဲ့ အန္တရာယ်နည်းတဲ့ ruthenium 106 ကို ဘဲဗက်စနစ်ခ် ရဲ့လောင်စာအနေနဲ့သုံးပုံရပါတယ်)
၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်မှာလည်း ရုရှားမြောက်ပိုင်း ယိုနော့ခ်ဆာ စက်ပစ်ကွင်းမှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်မူတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သိပ္ပံနည်းပညာရှင် ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာလည်း ဘဲဗက်စနစ်ခ် နျူကလီးယားခရုစ်ဒုံး စမ်းသပ်မူနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါ တယ်။ အတည်မပြုနိင်တဲ့ သတင်းတွေအရ စုစုပေါင်း ၁၃ ကြိမ်စမ်းသပ်ရာမှာ တကြိမ်(သို့) နှစ်ကြိမ်သာ အသင့်အတင့် အောင်မြင်သေးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဘဲဗက်စနစ်ခ် ရဲ့အဓိကပြသာနာကတော့ အနုမြူဓာတ်ပြုမူကထွက်လာတဲ့ ၁၆၀၀ ဒီဂရီဆဲစီးယက်ထိရှိတဲ့အပူနဲ့ မြင့်မားတဲ့မြန်နှုန်းတို့ကြောင့် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ဟာ ပျံသန်းနေရင်းကိုပဲ ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်မူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အပူနဲ့ မြင့်မားတဲ့ မြန်နှုန်းကြောင့် ဒုံးကိုယ်ထည်ဟာလည်း ပျံသန်းနေစဉ်မှာပဲ အက်ကွဲမူတွေဖြစ်နိင်ပြီး တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံတွေ နဲ့ယှဉ်ရင်စိတ်ချရမူအားနည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒုံးဟာ ရန်သူ့နယ်မြေကို ပျံသန်းနေတုန်း မိမိနယ်မြေမှာပါ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုတွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရင် သိပ်မဟန်ပါဘူး။ ဒါဟာ ၁၉၆၀ တုန်းက အမေရိကန်တွေ SLAM ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဲဗက်စနစ်ခ် စီမံကိန်းဟာလည်း စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြစ်နိင်ခြေရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ လုံခြုံစိတ်ချမှုအချက်တွေအရ အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်ချထားနိင်ချေနည်းပါတယ်။
ရှေးတုန်းကတည်းက လေယာဉ်ပျံတွေကို နျူကလီးယားစွမ်းအင်နဲ့မောင်းမယ့် စီမံကိန်းတွေ ဆိုဗီယက်နဲ့အမေရိကန်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနုမြူဓာတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်ပျံ့နှံမူ မတော်တဆ ပျက်ကျမူဖြစ်ခဲ့ရင် အဏုမြူဗုံး ကြဲချသလို ဘေးသင့်နိင်မူတွေကြောင့် ထိုစီမံကိန်းတွေကို အသီးသီးဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာပါ။
ယခု ဘဲဗက်စနစ်ခ် စီမံကိန်းဟာလည်း ကောလာဟလ တခု သာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
← သုဝဏ္ဏကိုဗစ်ကုသရေး စင်တာကို လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ အပြီးဆောက်မည်
ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးဗျူဟာတွေမှာ မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယတို့ရဲ့ ကွာခြားနေတဲ့ အချက်တွေ →